Daawo: RW. Khayre oo soo Afmeeray wajiga koowaad ee la xisaabtanka Golaha Wasiirada iyo waxa dhacay - Hablaha Media Network
Daawo: RW. Khayre oo soo Afmeeray wajiga koowaad ee la xisaabtanka Golaha Wasiirada iyo waxa dhacay
HMN:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa soo gaba gabeeyay wajiga koowaad ee la xisaabtanka Wasiiradiisa, taasoo shalay soo bilowday, iyadoo Wasiirada mid mid loogu yeerayo, lagana dhageysanayo waxqabadkiisa boqolka maalmood.
Qorshaha la xisaabtanka Golaha Wasiirada oo ah mid cusub, ayaa ujeedkiisa yahay sidii Ra’iisul Wasaaruhu u qiimeyn lahaa wasiir walba waxqabadkiisa boqolka maalmood ee ugu horeeya Xukuumadda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulamo fool ka fool ah la yeelanayay Wasiirada, waxaana uu ka dhageysanayay wasiir walba qorshe howleedkiisa iyo wixii uu qabtay labadii bilood ee u dambeeyay.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA RW. KHAYRE
Wasiiru dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha C/llaahi Xaamud ayaa sheegay in barnaamijka la xisaabtanka xukuumadda uu yahay sidii Wasiir walba looga dhageysan lahaa qorshe howleedkiisa iyo waxqabadka uu sameeyay boqolka maalmood.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay noqon doonto mid shaqo, isla markaana ay sameyn doonaan wax kasta oo shacabka loogu adeegayo, waana tallaabadii u horeysay nooceeda ee Ra’iisul Wasaaraha u qaado dhanka la xisaabtanka Xukuumaddiisa, iyadoo tani muujineyso siday uga go’an tahay inuu Wasiir walba ku koontaroolo shaqadiisa.